Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana ao amin'i Jean-Baptiste d'Alembert an'ny Rakipahalalana frantsay | Larry Sanger an'ny Wikipedia, ny Encylopedia lehibe indrindra eto an-tany - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Fiainana lasa teo amin'i Larry Sanger sy Jimmy Wales
Denis Diderot dia fantatra amin'ny anarana hoe mpiara-manorina, mpandray anjara voalohany ary lohandohan'ny mpanoratra ny rakipahalalana frantsay voalohany, fantatra amin'ny hoe Encyclopédie, izay navoaka voalohany tamin'ny 1751. Izy no loharano voalohany nanandrana nanolotra ny fahalalana rehetra satria fantatra tamin'ny vanim-potoana.
Tao amin'ny lahatsoratra iray hafa, Jimmy Wales, mpiara-nanorina ny Wikipedia, no fantatra fa reincarnation Denis Diderot.
Mpiara-miasa amin'i Diderot amin'ny famoronana Encyclopédie dia Jean-Baptiste d'Alembert, raha mpiara-miasa Wales dia nanangana ny Wikipedia dia Larry Sanger.
Lojika ny manontany tena raha i Larry Sanger no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Jean-Baptiste d'Alembert, toy ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, anisan'izany ireo tranga nodinihin'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny Oniversite any Virginia dia mahatafiditra ankizy amin'ny fahatsiarovana azy taloha izany dia noporofoina, asehoy fa mitombo amin'ny fanahy efa fantatsika tamin'ny fahatongavana ho nofo izy.
Ny fandinihana ny kambana Reincarnation an'i Ian Stevenson, MD
Ohatra iray mampihetsi-po amin'ny fomba itambaran'ny injeniera amin'ny fanahy miaraka amin'ny olon-tiana sy mpiara-miasa tamin'ny nofo taloha nisy ny Ian Stevenson's Twin Study. Stevenson dia nandinika kambana 31 (olona 62) izay nahatadidy ny fiainana taloha tamin'ny fahazazany izay nohamarinina. Ao amin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ireo kambana dia nanana fifandraisana manokana tamin'ny nofo taloha. Raha te hahalala bebe kokoa dia mankanesa any:
Larry Sanders amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao indray an'i Jean-Baptiste d'Alembert
Nandritra ny fotoana nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, ny fanahy nampitaina tamin'ny alàlan'i Kevin izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta, dia nanamafy fa i Larry Sanger dia i Jean-Baptiste d'Alembert tamin'ny nofo taloha.
Ankoatry ny maha-manam-pahaizana izay nanampy tamin'ny famatsiam-bola ho an'ny olombelona, ​​Jean-Baptiste d'Alembert dia manam-pahaizana momba ny teôlôjia mozika koa. Larry Sanger dia mpitendry lokista mahay.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny endrik'i Jean-Baptiste d'Alembert sy Larry Sanger.
Talenta fiainana taloha sy fitondran-tena ary fahaiza-manao: d'Alembert dia mpanome vola mpanohana ny frantsay Encyclopédie, toy ny nanampy an'i Sanger nahitana ny Wikipedia. Samy nandray anjara tamin'ny mozika avokoa izy ireo.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Jean-Baptiste d'Alembert | Larry Sanger dia tafaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy sy mpiara-miasa aminy Encyclopédie, Denis Diderot, ao amin'ny persona an'i Jimmy Wales.
Fiovam-pirenena: Frantsay i Jean-Baptiste d'Alembert, i Larry Sanger kosa teraka tany Etazonia. Ny fahafantarana fa ny fanahy dia afaka manova ny zom-pirenena, ny fivavahana ary ny firazanana ara-pirazanana amin'ny androm-piainany iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny fifandonana sy ny ady dia mifototra amin'ny tsy fitovizan'ireo marika ara-kolontsaina ireo.